XOG: Shan Laacib Oo Usoo Wada Ciyaaray Arsenal & Juventus Iyo Halka Uu Aaron Ramsey Ka Geli Doono Silsiladda Xidhiidhsanayd Illaa 1999-kii – Page 5 – Cadalool.com
Muddo 18 sannadood ah oo uu fagaareyaasha garoomada ku jiray, waxa uu Nicolas Anelka usoo ciyaaray kooxo badan, waxaanu ka mid yahay laacibiinta ugu socodka badan ee marba koox ka dega, isaga oo soo maray dunida Yurub illaa Asia.
Nicolas Anelka waa weeraryahan orod badan, halisna ah marka uu kubadda ka helo diilinta goolka horteeda, isaga oo lagu yaqaano xirfado badan iyo farsamo sarraysa.
Sannadkii 1997 ayaa ay Arsenal kasoo iibsatay Paris Saint-Germain, laakiin kuma uu waarin, waxaana uu u saftay 90 kulan oo kaliya oo uu u dhaliyey 28 gool, waxaana ka afduubatay Real Madrid oo ka heshay awooddiisa iyo qaabka gool-dhalintiisa oo ay xilligaas baahi u qabtay.
Nicolas Anelka ayaa duhur cad ku wargeliyey tababare Arsene Wenger inuu doonayo inuu ka tago oo uu ku biiro Real Madrid, waxaanu qasab kaga dhigay Arsenal inay ka iibiyaan Real Madrid oo uu sannadkii 1999 ku biiray, isaga oo xilligaas noqday ciyaartoyga dunida ugu qaalisan.
Waqti badan kuma sii qaadanin Real Madrid, waxaana uu sannadkii 2000 ku biiray PSG, waxaana uu ku laabtay Real Madrid ka hor intii aanay amaah ku siinin Liverpool. Kaddib waxa uu u ciyaaray kooxaha Manchester City, Fenerbahce, Bolton Wanderers, Chelsea, Shanghai Shenhua, West Brom, Mumbai City FC iyo Juventus oo uu sannadkii 2013 amaah ugu ciyaaray isaga oo ka yimid kooxda reer China ee Shanghai Shenhua oo uu muddo kaddibna ku laabtay.
Haddaba, shantaas ciyaartoy ee aynu hore kusoo sheegnay, waxa usoo wada ciyaareen kooxaha Arsenal iyo Juventus, waxaana raadkoodii ku taagan Aaron Ramsey oo haddii uu dhamaystiro heshiiska la warinayo inuu haddaba la gaadhay Juventus, noqonaya midka lixaad ee kooxahan u kala wareegay.